Goianà : Tondradrano sy adihevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2018 17:03 GMT
Ny Goianà Guyana (aza afangaro amin'ny Goiana (Guyane) dia vao haingana no niaina tondradrano mahery vaika, izay niteraka fahavoazana tamin'ny fambolena sy ny biby fiompy ary niteraka ihany koa hatezerana teny anivon'ireo blaogera. Tsy vaovao akory ny tondradrano, fa ny fivoarana farany tamin'ity andiany iray ity – Ny tatitry ny Oxfam International mikasika ny fahafahana mamaly haingana amin'ny krizy iray, izay mamaritra ity tondradrano ity ho toy ny « loza voajanahary feno tanteraka »- dia vao mainka nampitombo ilay resabe [amin'ny teny anglisy avokoa ireo blaogy tanisaina ato ].
Living Guyana, ilay blogy voalohany nanao resaka ankolaka momba ity tatitra ity, dia manao fanamarihana iray hafa :
Efa izao no mitranga nefa dia nanome baiko ny haino aman-jerim-panjakana ny fanjakana mba tsy hampiasa ny teny hoe « tondradrano » fa hoe « fiangonan-drano » no tsaratsara kokoa. Lavin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta ny hanaiky hoe misy loza eny an-kianja , ary dia nolazain'i Oxfam fa loza voajanahary aza ny zava-nisy.
Tohizany amin'ny fitsikerana haino aman-jery mahazatra sasany eny an-toerana noho ny tsy firaharahian'izy ireo ny zava-nitranga, ary tamin'ny mbola nanaovany ihany koa, tamin'izany fotoana izany, fanindrahindràana ny « Capitol News mahomby » noho ny nandrakofany tamin'ny antsipirihany « ahitana tafatafa natao tamin'ny tomponandraikitry ny Oxfam ao an-toerana ». Maka ny anjarany ihany koa ny fanjakana tao anatin'ny tsikera nataon'ity blaogera ity, izay mitanisa ny tatitry ny Oxfam :
Fandrindrana motraka teny an-toerana. Tsy misy setriny mivelatra be avy tamin'ireo mpisehatra.
Ho toy ny fanamarinana ny heviny, manao ity fanehoankevitra ity ny Living Guyana :
Tamin'ny 12:09 androany, nivezivezy tamim-pireharehana teo amin'ny FACEBOOK ny Minisitry ny Fambolena ary naneho hevitra tao amin'ny pejin'i Ruel Johnson.
Tsy mba misy zavatra tsara hafa azony atao afa-tsy ny midongizina eo amin'ny FACEBOOK ve ? Zavatra, toy ny manampy olona handritra ny rano ao an-tranony ? Izany ve no hanakaramantsika azy amin'ny volan'ny mpandoa hetra ? Mba hivezivezeny eo amin'ny FACEBOOK….raha toa ka ny vahoaka kosa difotra anatin'ny rano izay tonga hatrany amin'ny lavak'orony ?
Tsy mahagaga, mitosaka ny honohono mikasika ny fifandraisana henjana eo amin'ny Oxfam sy ny fanjakana ao Goianà, izay hamaivanin'ilay fikambanana misahana ny maha-olona, ary izay faritan'ny Mpandrindra Nasionaly ny Loza Voajanaharyao Goianà ho toy ny «mampiahiahy » ny antony mahatonga ny fihetsiny.
Mazava ho azy fa tsy nanakana ireo blaogera tsy hitanisa be ny votoatin'ilay tatitra izany- ary toa manomboka mihintsana ny loha sasany. Living Guyana no voalohany nanapaingotra ny hoe ”ny filohan'ny Sektreteram-panjakana ao Goianà sady Mpandrindra Nasionaly ny Loza Voajanahary, ny Dr Roger Luncheon, dia nanala tamin'ny asany amin'ny maha Sefon'ny Kaomisionan'ny Fiarovam-Bahoaka ny Lehiben'ny etamazaoro efa misotro ronono, i Michael Atherly , izay ny asany dia ny mandrindra ny fihetsiky ny fanjakana manoloana ny tondradrano ao amin'ny Morontsiraka Atsinanan'i Demerara sy ao amin'ny faritr'i Mahaica Mahaicony Abary”. Maneho hevitra mikasika ny fotoana hafahafa nitrangan'ity fanonganana ity koa izy.
Roa andro taorian'ny nitsaran'ny tatitry ny Oxfam ny fihetsiky ny fanjakana ho toy ny ‘motraka’ manoloana ny tondradrano ity hetsika ity. Ilay tatitra, izay nolavin'ny mpikambana maro tao amin'ny governemanta, dia toa nikapoka ity farany teo am-perinasa, na dia tsy nanome tsiny mivantana ny kaomisina fiarovana ny olontsotra aza ny Oxfam, nanamarika fotsiny fa tsy ampy fitaovana mba hamitana ny iraka tokony tontosainy ity fifitantanan-draharaha ity, izay nesorin'ny governemanta tsy ho azy.
Mety mihevitra isika fa i Atherly , Filohan'ny etamazaoro izay efa misitro ronono, dia olona natao hifatraran'ny tsiny rehetra amin'ny fanekena ny andraikiny tamin'ny fihetsika tsy nirindra tsara nataon'ny governemanta, na dia mandà hihevitra ny faritra tondraka ao MMA(Mahaica Mahaicony Abary) ho toy ny faritra trà-boina aza ity farany, ary mandà mihitsy ny hanaiky fa misy tondradrano amin'izao fotoana izao, ka tiany kokoa ny mamaritra izany ho toy ny « fiangonan-drano », sady mampiasa ny mediam-panjakana mba hanaovana hetsika fampielezankevitra moravidy momba izany. Ny Tambajotra Nasionaly Ho An'ny Serasera, izay an'ny fanjakana, ary ny gazety Guyana Chronicle dia nahazo ny fandraràna miafinkafina avy amin'ny Biraon'ny Filoha amin'ny fampiasana ny teny « tondradrano » ao amin'ny tatitra ataony.
Fotoana vitsy taorian'izany, nampiakatra sarin'ny kianja nalaina avy teny an'habakabaka nalefan'ny Guyana Providence Stadium i Living Guyana. Fa ny toa mahatohina kokoa an'ireo blaogera ao an-toerana dia ny toa tsy fisiana fitarihana mafy tena ao anatiny krizy indrindra :
Aiza ny mpitarika antsika? Aiza ny filohantsika? Am-pitsidihana izy ankehitriny, mihinjaka sy manao dia tsy misy ilàna azy any amin'ny firenana telo toa an'i Libia, Gresy sy Katara, samy mpilalao kely eran-tany, tsy manan-kery amin'ny fampiasam-bola goavana ao Goianà. Tombontsoa AOTRA no homen'ity fitsidihana ity an'i Goianà ary amin'ny fotoana mahasempotra hatreny amin'ny tendany ireo mponina ao Mahaica sy Mahaicony, ary efa ho telo herinandro izay ireo any Amorontsiraka Atsinanana no efa any anaty rano.